Travel – Sunthit Myanmar
၂၀၁၉ အတွက် ကမ္ဘာ့လုံခြုံမှု အပြည့်ဝဆုံး လေကြောင်းလိုင်းစာရင်းထွက်ရှိ
ယနေ့ခေတ်မှာ တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံကို ကူးသန်းသွားလာဖို့အတွက် အဓိကအသုံးပြုနေရတဲ့ ယာဉ်ကိုပြပါဆိုရင် လေ ယာဉ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ကြာင့် လေယာဉ်စီးကြတဲ့ ခရီးသွားတွေအတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှုအပြည့်အဝဖြင့် လိုရာခရီးကို စိတ်ချမ်း ချမ်းသာသာ သွားလာနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် AirlineRatings.com က နှစ်စဉ် လုံခြုံ စိတ်ချမှု အပြည့်အဝဆုံးလေကြောင်းလိုင်းစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ပေးနေကျဖြစ်ပါတယ်။ ယခု ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွက် စာရင်း ကိုလည်း ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စာရင်းအရ ကမ္ဘာ့လုံခြုံစိတ်ချမှု အပြည့်အဝဆုံး လေကြောင်းလိုင်းကတော့ သြစတြေးလျားရှိ Qantas လေကြောင်းလိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ AirlineRatings.com က ထိုစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ဖို့ရန်အတွက် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လေကြောင်းလိုင်းပေါင်း (၄၀၅)ခုကို ၁၂ လကြာ စောင့်ကြည့်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့အစည်းရှိ လေကြောင်းလိုင်းနှင့် ပတ်သက်တဲ့ စာရင်းစစ်များ၊ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စံချိန်စံနှုန်း… Continue reading ၂၀၁၉ အတွက် ကမ္ဘာ့လုံခြုံမှု အပြည့်ဝဆုံး လေကြောင်းလိုင်းစာရင်းထွက်ရှိ
Categorized as News, Travel Tagged ၂၀၁၉ အတွက် ကမ္ဘာ့လုံခြုံမှု အပြည့်အ၀အရှိဆုံး လေကြောင်းလိုင်းစာရင်းထွက်ရှိ
အသက်အငယ်ဆုံးနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးကို ခရီးသွားနိုင်သူအဖြစ် ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားတဲ့ အမေရိကန်သူလေး
အသက် ၂၁နှစ်အရွယ်ရှိ အမေရိကန်သူ Lexie Alford ဟာ ကမ္ဘာ့အသက်အငယ်ဆုံးနှင့် ကမ္ဘာ ပေါ်ရှိ နိုင်ငံ အားလုံးကို ခရီးသွားနိုင်သူအဖြစ် ကမ္ဘာ့ဂင်းနစ်မှတ်တမ်း Guinness World Record မှာ မှတ်တမ်း တင်ခြင်း ခံခဲ့ ရတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ မိသားစုမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် မွေးကတည်းက ခရီး သွားခြင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ မိန်ကလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမ အသက်၁၂အရွယ်ကစပြီး တစ်နေ့မှာ ကမ္ဘာပေါ် ရှိ အချုပ်အခြာအာဏာရှိတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၆နိုင်ငံကို သွားနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချကာ ခရီးစတင်ထွက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Lexie Alford ဟာ အသက်၁၈အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၇၂ နိုင်ငံကို သွားခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုနဲ့ သူမရဲ့ Instagramအကောင့်မှာFollower ၄၄,၀၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့ကာ Lexie Alford… Continue reading အသက်အငယ်ဆုံးနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးကို ခရီးသွားနိုင်သူအဖြစ် ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားတဲ့ အမေရိကန်သူလေး
Categorized as News, Travel Tagged ကမ္ဘာ့အသက်အငယ်ဆုံးနှင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကို ခရီးသွားနိုင်သူဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ အမေရိကန်က မိန်းကလေး
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာပြီးနောက် ပါကစ္စတန်သို့ပြန်လည်ပြေးဆွဲတော့မည့် ဗြိတိသျှ လေကြောင်းလိုင်း
၂၀၀၈ ခုနှစ်က ပါကစ္စတန်မြို့တော် Islamabad တွင် ဗုံးကွဲမှုကြောင့် လူ (၅၀)ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ထို အမှုအပြီးမှာပဲ British Airways ဟာ ပါကစ္စတန်သို့ လေယာဉ်ပြေးဆွဲရန် ရပ်တန့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ယခု ဇွန်လ ၂ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ကစပြီး British Airways ဟာ လန်ဒန်ဟိသရိုး လေဆိပ်မှ ပါကစ္စတန်သို့ Boeing 787s လေယာဉ်များဖြင့် တစ်ပတ် (၃)ကြိမ်ပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပါကစ္စတန်အတွက် သတင်းကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခိန်မှာ အနောက်တိုင်း လေကြောင်း လိုင်းတွေ ထဲတွင် British Airways ဟာ ပါကစ္စတန်သို့ ပြေးဆွဲတဲ့ တစ်ခုတည်းသောလေကြောင်းလိုင်းဖြစ်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့မတိုင်မီအထိ ဗြိတိန်နဲ့ ပါကစ္စတန်သို့ ပြေးဆွဲတဲ့လေကြောင်းလိုင်းဆိုလို့ ပါကစ္စတန် မှ PIA… Continue reading ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာပြီးနောက် ပါကစ္စတန်သို့ပြန်လည်ပြေးဆွဲတော့မည့် ဗြိတိသျှ လေကြောင်းလိုင်း
Categorized as News, Travel Tagged ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာပြီးနောက် British Airways လေကြောင်းလိုင်းက Pakistan သို့ ပြန်လည်ပြေးဆွဲ
ထိုင်းနိုင်ငံမှ အလွန်လှပသော Maya Bay ကမ်းခြေကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ ပိတ်ထားမည်
ထိုင်းနိုင်ငံ Phi Phi Leh ကျွန်းရှိ Maya Bay ကမ်းခြေဟာ အလွန်လှပတဲ့ အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံ ခြား ခရီးသွားတွေလည်း အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ အဲလိုလူကြိုက်များတဲ့ ကမ်းခြေကို သွားရောက် လည်ပတ်သူ ဧည့်သည်အလွန်များပြားတဲ့အတွက် ရေထဲရှိ သဘာဝကျောက်ဆောင်များ ပျက်စီးလာပြီး သဘာဝအလှတရားတွေ ပျက်စီးလာတဲ့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်အထိ ပိတ်သွားမယ် ဆို တာကိုတော့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ယခုအခါမှာတော့ Maya Bay ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ ပိတ်ထားမှာဖြစ်ကြောင်းကို တရားဝင်ထုတ်ပြန် လိုက်ပြီး ဖြစ်ပါ တယ်။ Maya Bay ကို မပိတ်မီအချိန်မှာ တစ်ရက်ကို ခရီးသည်ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော် လာရောက်လည်ပတ် ခဲ့တယ် လို့… Continue reading ထိုင်းနိုင်ငံမှ အလွန်လှပသော Maya Bay ကမ်းခြေကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ ပိတ်ထားမည်
Categorized as News, Travel Tagged ထိုင်းနိုင်ငံရှိအလွန်လှပသော Maya Bay ကမ်းခြေကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ ပိတ်ထားမည်
သိပ်မကြာတော့တဲ့အချိန်မှာ ပျောက်ကွယ်တော့မယ့် လေကြောင်းလိုင်း (၁၆) ခု
ကမ္ဘာမှာလေကြောင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းကို အသုံးပြုလာတာ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ အားလျှော်စွာ ထောင်နဲ့ ချီတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းများဟာလည်း လေယာဉ်ပျက်ကျမှု၊ ဆီဈေးများတက်လာမှု၊ နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုနဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ အစရှိတဲ့ အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့် ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလည်း မကြာတော့တဲ့ အချိန်ကာလအတွင်းမှာ ထပ်မံပျောက်ကွယ်တော့မယ့် လေကြောင်းလိုင်း (၁၆)ခု စာရင်းထွက်ရှိလာ တာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ကတော့- (၁)WOW လေကြောင်းလိုင်း Iceland အခြေစိုက် WOW လေကြောင်းလိုင်းဟာ ဥရောပနဲ့ မြောက်အမေရိကကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ပျံသန်းနေတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီး ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် နောက်ထပ်ငွေအရင်းအနှီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ CEO Skuli Mogensen ကတော့ ကုမ္ပဏီ ဒေဝါလီခံဖို့အတွက် ပြောနေပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ (၂)US Airways လေကြောင်းလိုင်း US… Continue reading သိပ်မကြာတော့တဲ့အချိန်မှာ ပျောက်ကွယ်တော့မယ့် လေကြောင်းလိုင်း (၁၆) ခု
Categorized as News, Travel Tagged သိပ်မကြာတဲ့အချိန်မှာ ပျောက်ကွယ်တော့မယ် လေကြောင်းလိုင်း (၁၆) ခု
ကမ္ဘာပေါ်က လူနေမှုစရိတ် အကြီးဆုံးနဲ့ ဈေးအပေါဆုံးမြို့တော်များ စာရင်းထွက်ရှိ
နှစ်(၃၀)အတွင်း နိုင်ငံပေါင်း(၁၃၃)နိုင်ငံရဲ့ နှစ်စဉ်စီးပွားရေးနဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကို စောင့်ကြည့်ပြီးနောက် ကမ္ဘာ့ ဈေးအကြီးဆုံးနဲ့ ဈေးအပေါဆုံးမြို့တော်တွေစာရင်းကို ပထမဦးဆုံး ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးအကြီးဆုံး ထိပ်ဆုံး မှာ နေရာယူထားတာကတော့ အချစ်မြို့တော်လို့ တင်စားကြတဲ့ ပြင်သစ်မြို့တော် ပဲရစ် Paris ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဈေး အများ ဆုံး Top-10 စာရင်းမှာ ဥရောပ(၄)နိုင်ငံက မြို့တော်တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ပဲရစ်ဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ထဲက ကမ္ဘာ့ဈေး အကြီးဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Paris မှာ အမျိုးသမီး တစ်ဦး တစ်ခါဆံပင်ညှပ်ရင် $119.4 ကျပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဈေး အကြီးဆုံး နိုင်ငံတွေရဲ့ စာရင်းကတော့- 1. Paris (France) 1. Singapore (Singapore) 1. Hong Kong (China) 4. Zurich… Continue reading ကမ္ဘာပေါ်က လူနေမှုစရိတ် အကြီးဆုံးနဲ့ ဈေးအပေါဆုံးမြို့တော်များ စာရင်းထွက်ရှိ
Categorized as News, Travel Tagged ကမ္ဘာ့ ဈေးအကြီးဆုံးနိုင်ငံ နှင့် ဈေးအပေါဆုံးနိုင်ငံ စာရင်းများထွက်ရှိ
ရုံးပိတ်ရက်ရှည်တွေမှာ ခရီးထွက်ချင်ပေမယ့် ဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့ မရတဲ့သူများအတွက် ဈေး သက် သက်သာသာနဲ့ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်တဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေကို တင်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်။ ပြည်တွင်း ခရီးထွက်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်လောက်နဲ့ပဲ ဥရောပ နိုင်ငံတွေကို သွားလည်ရင်းနဲ့ ဗဟုသုတတွေကို ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁) Vilnius, Lithuania — £147.35 ($191.92) လူဦးရေ 2.8 သန်းရှိတဲ့ Lithuania ဟာ ဥရောပ နိုင်ငံတွေထဲမှ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ Lithuania ရှိ Vilnius မြို့ တော်ကိုသွားဖို့အတွက် ပေါင်ငွေ £147.35 ဒါမှမဟုတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ 191.92 ဒေါ်လာသာ ကုန်ကျမှာဖြစ် ပါ တယ်။Vilnius မှာရှိတဲ့ အဆောက်အဦတွေရဲ့ ရှေးဟောင်း ဗိသုကာလက်ရာတွေကို ကြည့်ပြီး ၎င်းတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေး… Continue reading ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေကို သွားလည်ကြမလား
Categorized as Travel Tagged ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ European နိုင်ငံတွေကို သွားလည်ကြမယ်
မကြာခင်မှာ သင်္ကြန်ကာလကို ရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိနေရပ်ဒေသကို ပြန်လိုကြတဲ့ ပြည်သူတွေလည်း လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်ကားရှိသူတွေ၊ ငွေကြေးတတ်နိုင်ကြသူတွေနဲ့ လေကြောင်းခရီးကို အသုံး ပြုနိုင်သူတွေအတွက်တော့ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဂိတ်နဲ့ ဘာမှပတ်သက်ဆက်ဆံ စရာ မရှိပေမယ့် တစ်နှစ်မှာ တစ်ကြိမ်သာမိမိဒေသကိုပြန်ပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်တတ်ကြတဲ့ သာမန်မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုအတွက်ကတော့ အဝေးပြေးကားဂိတ်တွေနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ ဒီကာလဟာ စိတ်ညစ်စရာအကောင်းဆုံးကာလလို့ပဲ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် သင်္ကြန်ကာလ ရောက်ရင် မိမိဇာတိဒေကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြန်ကြရတဲ့ ရန်ကုန်မြို့နေ ရခိုင်တိုင်းရင်း သား ပြည်သူအများစုအတွက်တော့ မိမိဒေသကို ပြန်ချင်ဇောနဲ့ သည်းခံကျိတ်မှိတ်ပြီး သွားလာကြရပေမယ့် စိတ်ညစ်စရာ အ ကောင်းဆုံးကာလတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာပါလဲ။ ခရီးသည်တွေအများစုပြုံကျလာတဲ့ ဒီလို အချိန်ခါ မျိုးမှာ ကားဂိတ်တွေဟာ ကားခတွေကို တိုးမြှင့်ကောက်ခံ၊ စားသုံးသူဖက်က ဝယ်လိုအားတက်လာတဲ့အတွက် ဝန် ဆောင်မှုတွေကို ဖြစ်ကတတ်ဆန်းလုပ်တာတွေကို… Continue reading သင်္ကြန်ပိတ်ရက် ခရီးသွားတွေထံမှ ကားခပိုတောင်းတဲ့ ဂိတ်တွေကို ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသင့်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ်နှစ်အတွင်းခရီးသွားအများဆုံးလူမျိုးက တရုတ်လူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင် သင့်အတွက် အံ့သြစရာ တော့ မရှိပါဘူး။အကြောင်းရင်းကတော့ လက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေဟာ သန်းပေါင်း ၁၄၀၀ ကျော်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ အပြင် လက်ရှိတရုတ်ရဲ့ တစ်မျိုးသားလုံး အသားတင်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏဟာ ၂၇ ထရီလီယံကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး တစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေဟာလည်း ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ နီးပါးကို ရောက်ရှိခဲ့အတွက် တရုတ်လူမျိုးတွေ အစစအဆင်ပြေဖူလုံလာတဲ့ အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ တရုတ်ရဲ့ GDP အချိုးဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ ၂.၃၂%ပဲရှိခဲ့ရာကနေ ၂၀၁၈ခုနှစ်မှာ ၁၈.၇၂ % အထိ အံ့မခန်းတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါတင်မကပါဘူး ကမ္ဘာတစ်ဝန်း နိုင်ငံရပ်ခြား တရုတ်လူဦးရေက လည်း သန်း၅၀ကျော်တောင်ရှိနေတာကလည်း တရုတ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အထောက်အကူတစ်ခု ဖြစ်နေပြန်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တရုတ်တို့ရဲ့ နှစ်ကူးပွဲတော်ကာလရောက်ပြီဆိုရင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတရုတ်ခရီးသွားတွေနဲ့… Continue reading တရုတ်က နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကာလ ခရီးသွားဝင်ငွေအမေရိကန် ဒေါ်လာ ၇၆.၂၁ ဘီလီယံရရှိ
သင်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရဲ့ ပါဝါကို သင်သိပါသလား
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဘဝမှာ အမှတ်ရစရာတွေ၊ရင်နာစရာတွေကတော့ အများသားလို့ ဆိုရမှာပါ။ဒီအထဲမှာ အတိတ်က နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိစ္စလည်းပါပါတယ်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တစ်ခုရဖို့အတွက် ရန်ကုန်မြို့လယ်၊ ပန်းဆိုး တန်းလမ်းပေါ်က ကျဉ်းမြောင်းလှတဲ့ ရုံးဟောင်းကြီးပေါ်မှာ ချွေးတလုံးလုံးကျအောင် အထက်တက်အောက်ဆင်း လုပ် ခဲ့ရတာကို ကြုံခဲ့ရသူတိုင်း အမှတ်ရကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်တုန်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် နိုင်ငံ ရပ်ခြားဆိုတာ ထီးတော်မိုးခံရသူတွေ၊သံတမန်မိသားစုတွေနဲ့ အဲဒီတုန်းက ခေတ်စားခဲ့တဲ့ သင်္ဘောသားတွေကလွဲလို့ ကျန်လူအများစုကစိတ်ကူးထဲတောင်မစဉ်းစားရဲခဲ့ကြပါဘူး။Photo Credits:Daily 11 ခုတော့ခေတ်စနစ်တွေပြောင်းလဲလာတဲ့အတွက် ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို သွားရောက်လည်ပတ်ကြသူတွေ၊ အလုပ်အကိုင် သွားလုပ်ကြမယ့်လူတွေနဲ့ ရန်ကင်းက နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့နေရာဟာ အရင်ကနဲ့စာရင် အတော့်ကို တိုးတက် လာတယ်လို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် မြို့ကြီးတွေမှာလည်း စီစဉ်ပေးထားတာကြောင့် နယ်ကပြည်သူ တွေအတွက်လည်း ပိုအဆင်ပြေလာတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ကိုယ်သွားချင်တဲ့ ပြည်ပခရီးကို သွားရောက်နိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ့်လက်ထဲကို အနီရဲရဲ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်လေးရလာပြီဆိုရင်… Continue reading သင်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရဲ့ ပါဝါကို သင်သိပါသလား